Rakkoo nageenyaafi sochiin filannoo dursaa jeeqamuusaaf Buufata 40 keessatti filannoon akka hin adeemsifamne beeksifame - Oromia Media Network
Filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa marsaa 6ffaa, Waxabajji 14, 2013 adeemsisuuf karoorfamee ture, sababa maqaa rakkoo nageenyaafi sochii filannoo dursaa jeeqamuu jedhuun buufataalee filannoo 40 keessatti filannoo akka hin adeemsifamne murtaa’e.
Naannooleen rakkoo nageenyaaf saaxilaman jechuun buufatni filannoo muraasni haqaman kunniinis, Oromiyaa, Benishaangul Gumuz, Somalee Amaaraafi Naannoo Uummattoota Kibbaa keessatti akka argaman Boordiin filannoo Biyyaalessa ibsa baasee beeksisee jira.
Sababni adda cituu filannoo buufataalee afurtama kanaas, rakkoo nageenyaafi sochii filannoo dursaa jeeqamuu olaanaan waan keessatti mullateef jechuun boordichi ibseera. Akka Boordiin filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaa jedhutti rakkoolee mullatan kana cinaatti dhiisanii, filannoo Biyyaalessa buuftaalee kanatti geggeessuun rakkoo caaluuf saaxila waan ta’eef, buufataalee 40 kanarraa filannoon adda akka citu murteessuuf dirqamani.
Naannoo Oromiyaa keessatti namni kaardii filannoo hin fudhanne, waajjiraalee mootummaarraa tajaajila Hawaasummaa akka hin arganne taasifamaa akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo Somaalee keessatti ammoo kaardiin filannoo heddumminaan mana nama tokko keessatti argamaa tureera. Naannoo Amaaraa keessattis rakkoon wal fakkaataa nama tokkichaaf kaardii filannoo 3-5 kennamaa turuusaafi naannoo Uummattoota kibbaa keessatti ammoo barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa kanneen umuriin isaanii filannoof hin geenye dirqisiisanii Kaardii akka fudhatan taasifamaa akka ture gabaasaa turreerra.
Boordiin filannoo Biyyaalessa Itiyoophiyaas rakkinoota kana, moggaasa sochiin filannoo dursaa jeeqamuu jedhuun yoo ibsu, rakkoo nageenyaa itti dabaluun sababoota kanaaf jecha Naannolee olitti heeraman keessaa buufata afurtamarratti filannoon akka hin adeemsifamne murteessuusaa ibse.